10-ka magaalo ee ugu khatarsan dunida (Tirsiga Muqdisho ka gashay) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 August 2014 8 August 2014
Mareeg.com: Sanadkii tegay ee 2013 wargeyska kazoo baxa Mareykan ee lagu magacaabo “LIVE WIRE” ayaa soo saaray liiska magaalooyinka ugu khatarta badan aduunka, waxaana xilligaas qiimeynta xooga lagu saaray heerka fal-dambiyeedka, waxaana sanadkaas kaalimaha hore ka galay magaalooyin dhaca Latin America.
Markan oo la joogo sanadka 2014 ayaa sidoo kale wargeyskaas soo saaray liis cusub, wuxuuna qiimeynta xooga ku saaray heerarka dambiyada culculus, qulqulatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale.
Haddaba halkaan ka aqri 10-ka magaalo ee sida la yiri ugu khatarta badan caalamka iyo halka ay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka gashay.
1- Aleppo, dalka Syria: Magaaladan waxaa muddo ka badan 3 sano ku dagaalamaya ciidamada Bashaar Al-asad iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah, waxaana halkaas ku socda duqeymo diyaaradeed, taasoo keentay in nolosho ciriir noqoto oo 100,000 oo ruux uga cararaan dhanka dalka Turkiga.
2- San Pedro Sula, dalka Honduras: Sanadkii 2-aad ayaa magaaladaasi noqday caasimadda dilka caalamka, iyadoo sanadkii tegay lagu dilay 1411 ruux, halka dadka magaaladaas degan lagu sheegay 752,990 ruux, waxaana celcelis maalintii lagu dilaa ilaa 20 qof.
3- Caracas, dalka Venezuela: Magaaladan waxaa mudaaharaadyo joogto ah caadi ka noqdeen tan iyo markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaas, Hugo Chavez, 5-tii bishii March 2013.
Dadka ayaa ku kacsan xukuumadda, waxaana kordhay faldambiyeedyada, halka maciishaduna sare u kacday. Waxaa laga cabsi qabaa in dalkaas uu ka dhaco afgembi milateri.
4- Cape Town, dalka South Africa: Magaaladan waxey ka mid tahay meelaha dalka Koonfur Afrika 9-kii sano ee lasoo dhaafay dambiguyadu kusoo yaraanayeen, hase ahaatee waxey haatan bilaabeen iney markale kor u kacaan.
Kor ukaca dilka ayaa gaaray 0.6%, halka isku dayada dil gaareen 6.5%, sidoo kale xatooyada rabshadda wadata ee guryaha ayaa gaartay ilaa 3.6%, iyadoo xatooyada gaadiidku gaartay ilaa 5.4%, halka dambiyada la xiriira daroogadu gaareen 13.5%, boobka gaadiidka xamuulka ahna uu gaaray 15%.
5- Kabul, dalka Afghanistan: Magaaladan waxaa si weyn ugu badan qaraxyada iyo ismiidaaminta ay sameynayaan dagaalyahanada Daalibaan, waxaana Qaramada Midoobay iyo xulafada Mareykanku ka cabsi qabaan in xaaladeedu sii xumaato haddii ciidamada Mareykanku dalkaas ka baxaan dhamaadka sanadka 2014.
6- Acapulco, dalka Mexico: Magaaladan waxaa aad ugu badan rabshada iyo isku dhacyada ka dhasha ka ganacsiga Maandooriyaha. Waxey magaaladaan ahaan jiray deked aad dadka usoo jiidata, laakin haataan waa laga kala dhaqaaqay maadaama xaalkeedu xumaaday.
7- Mogadishu, dalka Somalia: Magaalada ayaa ah magaalo aan deganayen oo dalalka reer galbeedku inta badan uga digaan muwaadiniintooda iney tagaan, waxaa ku badan dilalka, afduubka iyo qaraxyada lala beegsanayo meelaha ajaanibtu degaan.
8- Karachi, dalka Pakistan: Heerka fal dambiyeedka magaaladan ayaa gaaraya 12.% marka loo eego dadka ku nool, waxey aad uga sareysaa ayaa la leeyahay dhamaan magaalooyinka caalamka ee aan kala dambeyntu ka jirin.
Magaaladan ayaa caaan ku ah dilka ay geystaan dadka adeegsada Mootooyinka, waxaana la sheegay in dadkaas qaataan $700 ilaa $1000 si ay u dilaan booliska, ganacsatada, dadka mucaaradka ah, siyaasiyiinta iyo muwaadiniin kale ee aan waxba galabsan.
9- Maceio, dalka Brazil: Suuqayada magaaladan ayaa kor u socda, waxaana barbar socda fal dambiyeedyada, iyadoo ay ku daban yihiin dadka saboolka ah, kuwaasoo kooxaha burcadda ay uga faa’iideystaan cabsi gelinta dadka, iyagoo u damaanad qaadaya iney dowladda ka xoog weynyihiin.
10- Camden, New Jersey, USA: Magaaladani maaha oo kaliya magaalada ugu saboolsan Mareykanka, ee waxey sidoo kale tahay magaalada ugu khatarta badan, heerka baagamuudada ayaa gaaray 30-40%, halka tacliin ka cararku gaaray 70%.
Magaalada waxaa si weyn ugu faafay musuqa, waxaana 20-kii sano ee lasoo dhaafay la xiray saddex duq magaalo, waxaana booliska magaaladaas lagu eedeeyey iney dhoodhoobaan cadeymo been abuur ah, sidoo kalana dadka si khaldan u xiraan.
Camden waxaa ku yaalla in ka badan 100 suuq oo looga ganacsado daroogada, waxaana maamulka suuqyadaas haya kooxo burcad ah.
Waxaa tarjamay: Cabdullaahi Xasan
Xukuumadda Soomaaliya oo ansixisay sharci lagu xakameynayo hubka sharci darrada ah